Waxyaabaha ugu Wanaagsan ee WordPress ee Goobtaada Ganacsi
Talaado, Janaayo 26, 2021 Arbacada, Agoosto 25, 2021 Douglas Karr
Tani waa liistada ka mid ah waxyaabaha aan kugula taliyay WordPress ee loogu talagalay ganacsiyada si kor loogu qaado loona wanaajiyo boggooda WordPress oo loogu beddelo goob beddelaad ah. Waan cusbooneysiinayaa marba haddii la soo saarayo waxyaabo cusub.
Caqabadaha Suuqgeynta - Iyo Xalka - 2021
Arbacada, Janaayo 13, 2021 Arbacada, Janaayo 13, 2021 Rich Smith
Sanadkii la soo dhaafay wuxuu ahaa safar culeys badan oo suuqleyda, taas oo ku qasbeysa ganacsiyada ku dhowaad qayb kasta inay udub dhexaad u noqdaan ama xitaa beddelaan istiraatiijiyadda oo dhan iyadoo la wajahayo duruufo aan la fahmi karin. Dad badan, isbeddelka ugu caansan wuxuu ahaa saameynta kala fogaanshaha bulshada iyo hoyga meesha, taas oo abuurtay koror ballaaran dhaqdhaqaaqa dukaamaysiga ee internetka, xitaa warshadaha meesha ecommerce aan hore loogu dhawaaqin. Isbeddelkani wuxuu keenay muuqaal dijitaal ah oo camiran, iyadoo ururo badan ay ku tartamayaan macaamiisha
5 Astaamood oo Muhiim ah oo laga Raadinayo Foomka Dhismaha Foomka Onlineka ah
Haddii aad raadineyso hab fudud, wax ku ool ah, oo ammaan ah oo aad ku soo uruurin karto macluumaadka aad uga baahan tahay macaamiishaada, mutadawiciintaada, ama rajadaada, fursadaha ayaa ah in foom sameeyaha khadka tooska ah uu kordhin karo wax soo saarkaaga si baaxad leh. Adiga oo ka hirgeliya foomka internetka foomka ah ee ururkaaga, waxaad awoodi doontaa inaad iska dhaafto geeddi-socodka buug-gacmeedyada waqti-lumiska ah oo aad keydiso waqti, lacag, iyo ilo ku filan. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira dhowr qalab oo halkaas ka jira oo laga kala dooran karo, oo dhammaan dhismayaasha foomka internetka looma abuurin siman.
Kukiyada ma ahan kuwo mudnaan dheeraada nasiib ahaan: Sida Aqoonsiga iyo Shakhsiyadeynta shaqsiyeed ay isu beddelayaan Dunida Cookie-ka kadib
Markaan galno barnaamijkeena Uber, wuxuu si otomaatig ah kor ugu qaadayaa meelaha aan u dhoweyney. Markii aan booqanno degel websaydh ah dharka, waxaan aragnaa waxyaabo la soo jeediyey oo laga soo qaatay wixii aannu hore u soo iibsan jirnay. Markii aan internetka ka baareyno agabka kaamamka, waxaan si deg deg ah ugu adeegnay xayeysiisyo banner la xiriira badeecadaas. Markii aan furno Google ama Khariidadaha Apple, waxaa naloo fidiyaa meelaha sida caadiga ah loo booqdo iyadoo lagu saleynayo waqtiga iyo meesha hadda la joogo. Waa wax walba oo ku saabsan shakhsi ahaaneed waana dhammaan arrimaha hoos u dhaca hal shay -
Halxiraalaha Aqoonsiga ee Maareynta Xogta Macaamiisha
Khamiista, Oktoobar 18, 2018 Sabti, Febraayo 13, 2021 Sameer Narula
Dhibaatada Aqoonsiga Macaamiisha Caddooyinka Hindu-ga, Ravana, caalimka weyn, iyo boqorka jinka, wuxuu leeyahay toban madax, oo tilmaamaya awoodiisa iyo aqoontiisa kala duwan. Madaxyadu waxay ahaayeen kuwo aan la burburin karin oo awood u leh inay wax sawiraan oo dib u soo noqdaan. Dagaalkooda, Rama, oo ah ilaah dagaalyahan, waa in uu ka hooseeyaa madaxa Ravana oo uu bartilmaameedsadaa fallaarta qalbigiisa kali ah si uu ugu dilo wanaag. Waqtiyada casriga ah, macaamilku waxoogaa ayuu u eg yahay Ravana, ee ma ahan isaga